Baafata halqaraa gooddayyaa filatamee bani - Unka - Deetaa cuqaasi
Kamshaa Unka Too'atannootaa yookin Unka saxaxa bani,Cancala sajoo Unka - Deetaa fili
Himni SQL LibreOffice xinxalamuu fi dhabuu isaa ifteessa. Yoo gara "Eeyyee" qindaa'e, qabduu ... sanduuqa tarree Qabiyyeeittaanuu cuqaasuu sandeessa. Iddoo galfata kuusaa deetaa saxatoon uumnutti kun fooddaa bana. Weyta fooddaa san cufnu, himni SQL galfata uumamee sanduuqaQabiyyee tarree keessatti sugama.
Yoo deetaan haqama ta'e murteessi.
Yoo unkaan deetaa haaraa qofti dabalataan hayyamamu (Eeyyee) ykn yoo amaloota biroo akka gaaritti hayyama (miti)t ilmaama.
Yoo unkaa xiqqaauumte, dirree deetaa unkaa haadhoo walsimata haadhoo fi unkaa xiqqaa gidduu gaafatamaa godhu galcha. Gatiiwwan baay'ee galchuuf, naqa sararaa tokko booda Jijjiirraa + Galchi dhiibi.
Yoo deetaan dabalama ta'e murteessi.
Haalota deetaa unkaa keessaa gingilchuuf barbaachisan galcha. Ibsamoonni gingilchaa seerota SQL hordofan gaalee IDDOO osoo hin fayyadamin. Fakkeenyaa, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.
Yoo deetaan fooyyaa'a ta'e murteessi.
Dalagaawwan naannawinsaa kabala unkaa xiqqaa keessaa fayyadaman ifteessa.
Madda deetaa unkaa agarsiisuu qabu ibsa. Yoo qabduu ... cuqaaste, qaaqa Banaa waamuu dandeessa, iddoo maddaa deetaa filuu dandeessutti.
Akkamitti naannawiinsi furtuu cancalee fayyadamuun hojjatamu qaban tilmaama. Furtuu cancalaa fayyadamuun, unkaa keessa gara fuulduraa siiqsuu dandeenya. Yoo furtuu jijjiirraa walduraa duubaan dhiibaman, naannawinsi kallatti faallaa hordofa. Yoo dirree dhumaa(ykn jalqabaa) dhaqqabdee fi furtuu cancala deebitee dhiibde, galteewwan garagaraa qabaachuu danda'a. Furtuu too'annoo filannoowwan asiin gadii:
Qabiyyee unkaaf fayyaduu danda'an tilmaama. Qabiyyeen gabatee ykn galfata (durtumaan kuusaa deetaa keessatti uumaman) argaman ta'uu danda'u, ykn hima SQL iin ibsamuu danda'u. Qabiyyee galchuun dura qabdu gosa sirrii Gosa qabiyyeekeessaa ibsuu dandeessa.